NK | महिनावारी भएका बेला के कुरामा ध्यान दिने?
महिनावारी भएका बेला के कुरामा ध्यान दिने?
महिनावारी भएको बेला ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
महिनावारी हुँदा व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सरसफाइमा ध्यान दिइएन भने गन्हाउने सेतो पानी बग्ने, योनी चिलाउने, पिसाब पोल्ने तथा संक्रमण हुन सक्छ। सफाइको कमीले यौनांगमा घाउ भई हिँड्न गाह्रो हुन्छ। यौनांग सफा पानीले धुुनुपर्छ। रगत लागेको छ भने मनतातो पानीले धुुनुपर्छ। यो बेलामा पानीमा फिट्किरी हालेर पनि यौनांग सफा गर्न सकिन्छ। नुहाएर सफा बन्नुपर्छ।
महिनावारी भएको बेला शरीरबाट रगत बग्छ। शरीर कमजोर महशुस हुन्छ। शरीरलाई बलियो बनाउन पौष्टिक खाना, सागसब्जी, तरकारी, फलफूल दुध, दही, गेडागुडी, प्रशस्त मात्रामा खानुपर्छ। टुसा उमारेको गेडागुडी, चाकु, फलामको भाँडामा पकाएको दाल गहत आदिको प्रयोगले शरीर स्वस्थ्य बनाउँछ ।यसले रक्त अल्पताबाट पनि बचाउँछ।
महिनावारी हुँदा नरम सुतीको कपडाको टुक्रा वा स्यानेटेरी प्याड प्रयोग गरेर सजिलै र सफासँग व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यसबाहेक अहिले मेन्सट्रुयल कप र टेम्पोन पनि बजारमा पाइन्छन्। महिनावारी हँदा कसैकसैलाई तल्लो पेट दुख्ने, स्तन दुख्ने, ढाड दुख्ने,हात खुट्टा करकर खाने, कसैलाई बेचैन, तनाव हुने , टाउको दुख्ने पनि हुन्छ।
सामान्य अवस्थामा ४ देखि ७ दिनसम्म रगत बग्नु समान्य हो तर कसैलाई १० देखि १५ दिनसम्म रगत बगिरहने भयो भने उपचार गराउनु पर्छ। यदि हरेक २– २ घण्टामा प्याड फेर्नु पर्ने अवस्था आयो भने त्यसलाई धेरै रगत बगेको मानिन्छ। त्यस्तो भएमा के गर्ने त?
तल्लो पेटमा हलुका मालिस गर्ने ।
तातो पानी राखेको रबरको थैला वा बोतलमा पानी राखेर सेक्ने
दुध, दही, फलफूल, सागपात, गेडागुडीको झोल खाने।
२ हजार २९५ कोरोना संक्रमित थपिए, १६ को मृत्यु
सातै प्रदेशमा प्रसूति सेवा विस्तार गर्ने तयारी छ: स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ
न्युजिल्यान्डमा खोप लगाएकी महिलाको मृत्युबारे फाइजरले अनुसन्धान गर्ने
४० लाखले पुरा गरे दोस्रो डोज